Public Kura | » ‘सबै गरिब परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्छु’ ‘सबै गरिब परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्छु’ – Public Kura
‘सबै गरिब परिवारलाई आवासको व्यवस्था गर्छु’
जितेन्द्रनाथ शुक्ल (बब्लु) : अध्यक्ष उम्मेदवार, सम्मरीमाई गाउँपालिका (नेकपा माओबादी केन्द्र)
२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा रुपन्देहीको सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्षमा जितेन्द्रनाथ शुक्ला (बब्लु) निर्वाचित भए । पाँच वर्षको आफ्नो कार्यकालमा हरेक क्षेत्रमा एकीकृत विकास गरेको उनी बताउँछन् । उनी फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उक्त गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार छन् । आफूले पाँच वर्षमा गरेका कामको मूल्यांकन फेरि हुनेछ भन्नेमा उनी विश्वस्त छन् । यसै सन्दर्भमा शुक्लासँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :
प्रचार–प्रसार कसरी अघि बढेको छ ?
हामीले प्रचार–प्रसारलाई व्यवस्थित गरी तीव्रताकासाथ अघि बढाएका छौं । समूहगत रुपमा गाउँ, टोलटोलमा कार्यकर्ताहरु खटिनुभएको छ । घरदैलो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं । सम्मानित जनताहरु प्रचारमा जुटिरहनु भएको छ । मतदाताहरु बिगतमा भन्दा केही बढ्नुभएको छ । मतदातासँग मत माग्ने मात्र नभई मत हाल्ने तरिका पनि कार्यकर्ताहरुले सिकाइरहनु भएको छ । मतदातालाई सचेतना पनि दिएका छौं ।
यहाँ विगतमा गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुभएको थियो, गएको कार्यकालमा के–कस्ता काम गर्नुभयो ?
सम्मरीमाई देशको एकदम पिछडिएको गाउँपालिका थियो । म निर्वाचित भएर आउँदा विकाको नाममा शून्य थियो । आजको मितिमा म निर्वाचित भएर आएपछि गाउँपालिका भित्र साढे १९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । गाउँका गल्लीहरु ४८ किलोमिटर पीसीसी ढलान भएको छ । २६ किलोमिटर ब्रिक सोलिङ भएको छ । हामीले सडक पूर्वाधारमा धेरै ध्यान दिएका छौं । त्यसैगरी आँखा अस्पताल निर्माणको क्रममा छ । भैरहवाको आँखा अस्पतालको सहकार्यमा काम भइरहेको हो । पालिकाभित्र दुईवटा एम्बुलेन्स ल्याएर संचालन गरेका छौं । शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार बिकास लगायतका काममा १० करोड लगानी गरेका छौं । असुरैनाको बिद्यालय कक्षा ८ सम्म सञ्चालनमा थियो । अहिले १२ कक्षासम्म पढाई हुन्छ । म आउँदा गाउँपालिकामा एउटामात्र उच्च माबि थियो, अहिले २ वटा पुगेका छन् । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य चौकीहरुको स्तरोन्नती भएको छ । ३ वटा स्वास्थ्य चौकीमा प्रसूती केन्द्र (२४ घन्टे सेवा) सञ्चालनमा छ । गाउँपालिका भित्रको १७ वटा मदरसाहरुको बिकासका लागि सहयोग गरिएको छ । मदरसाहरुमा २ करोड २५ लाख भन्दा बढी बजेट छुट्याएर काम गरेका थियौं ।
यसबाहेक अन्य कामहरु के–के भयो ?
मेरो कार्यकालमा गरिब आवास निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण गरेको छु । गाउँपालिका अध्यक्ष स्तरीय आवास कार्यक्रम अनुसार १ सय १४ घर निर्माण गरी हस्तान्तरण भएको हो । एक घरवापत यस कार्यक्रममा २ लाख रुपैयाँ खर्चिएका थियौं । प्रत्येक घरधुरीका लागी भरी ग्याससहितको सिलिण्डर बितरण गर्ने निर्णय भए अनुसार निर्वाचनको आचारसंहिता लागु हुनु अघिसम्म गाउँपालिकाका ५ वडाहरुमा ग्यास सिलिण्डर प्रदान गरिसक्यौं । यसमा जनताको पनि सहभागिता छ । ग्यास चुल्हा जनताको र गाउँपालिकाले ग्याससहितको सिलिण्डर प्रदान गरेका हौं । यो कार्यक्रमले पनि जनता निकै खुसी हुनुभयो । मैले बिगतमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको धेरै कामहरु गरेको छु । युवाहरुको लागि आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरु भएका छन् । यो हाम्रो क्षेत्र भनेको कृषि क्षेत्र हो । कृषकहरुका लागि एक हजार २ सय भन्दा बढी पम्पसेट बितरण गर्यौं । त्यसैगरी पिउने पानीका लागि २ हजार बढी नल्का बितरण गर्यौं । सुरुमा शिक्षकहरु विद्यालय आएर १० बजे आएर गइहाल्ने समस्या थियो । लगत्तै बिद्यालयमा इ–हाजिरी सुरु गरायौं । इ–हाजिरी सुरु पछि यो समस्या हटेको छ । धेरै समस्या थियो गाउँपालिकामा समस्याहरु कम गर्ने प्रयास धेरै भयो । सबै समस्या एकै पटक हट्ने होइन्, मिनिमाइज गर्ने प्रयासमा हामी लाग्यौ र सफल पनि भयौं ।
गाउँपालिकाका समस्याहरु के छन् ?
गाउँपालिकामा समस्यै समस्या थिए । बिगतका सांसद जनप्रतिनिधिहरुले केही गरेको देखिएन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विरोजगारी, सिंचाई, गरिबी यहाँका मुख्य समस्या हुन् । ती समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा हामी छौं ।
फेरि जनताको माझ के एजेन्डा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ ?
जनतासँग मत माग्न जाँदा मैले ५ सालमा राम्रो काम गरेको भए मत दिनुस् भन्दै आएको छु । मलाई जबरजस्तीको मत चाहिँदैन । मेरो कामको मूल्यांकन गर्नुस् भन्ने नै हो । मलाई प्यारको सम्मानको मत चाहिन्छ । मैले ५ साल खुनपसिना एकएक गरी जनताको लागि काम गरेको छु । जनताले बुझेका छन् । जनता अहिले निर्वाचनमा मेरो लागि लडिरहनु भएको छ । म धेरै मत ल्याएर निर्वाचित हुनेछु ।
प्राथमिकता के–के हुन् ?
मुख्य प्राथमिकता भनेको गरिव आवास हो । गरिव आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्नेछु । त्यसैगरी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनेछु । समाजलाई शिक्षित गराउनु एक जरुरी छ । त्यसैले शिक्षामा प्राथमिकता दिन्छु । जसरी गएको ५ वर्षमा शिक्षामा हामीले धेरै काम गर्यौ । पिउने पानीको समस्या छ । यहाँका जनता अझै पनि ४०–५० फुट गहिराईको पानी पिउन बाध्य छन् । २ हजार बढी हेन्डपाईप बितरण गर्यौ । ३ स्थानमा ओभरहेड टन्की बनिरहेका छन् र त्यहीबाट स्वच्छ पानी बितरण गर्नेछौं ।
जितका आधार के छन् ?
मेरो जितको आधार मेरो सम्मानित जनता हो । बिगतमा मैले गरेका कामहरुलाई मूल्याकंन गरी जनताले मलाई फेरि निर्वाचित गराउनु हुनेछ ।